Abesifazane namantombazane aye ayisebenzisa kaningi imibala izinwele ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Kwamanye kungcono indlela ukugqama esixukwini, kuyilapho abanye nje ukupenda phezu kwempunga. Ukudweba "L'Oreal Prodigy", okuyinto libuyekeza izokwethulwa kulesi sihloko libhekisela brand ethandwa namuhla. Yena uphathisa inqwaba abesifazane. It has izizathu lalo.
ukupenda umehluko "Loreal Prodigy" kusukela analogue
Kwaphela iminyaka eminingi, emakethe ngoba izinwele udayi imikhiqizo ekhona ngaphandle ammonia. Ukudweba "L'Oreal Prodigy", ukubuyekezwa zazo ezimweni eziningi ezinhle, libhekisela zalolu hlobo. Ammonia-free Ukwakheka ubhekwa kahle. Ethanolamine, engena upende, okuvumela zombala ukuze ukungena isakhiwo izinwele, ngaphandle kokudala kubo phi hlungu.
New upende "Loreal Prodigy", ukubuyekezwa zazo ayesekhona ezincwadini eziningi, uye yaba undab 'uzekwayo abathengi. Konke lokhu sibonga ubuchwepheshe ekhethekile evumela ekucebiseni izinwele anombala ocwazimulayo Amazing futhi abagcine for a eside isikhathi shiny. Upende kuhlanganisa mikromasla M-Ot, bona amsize ukuba zisakazwe ngokulinganayo kuyo yonke izinwele futhi unikeze yi zemvelo.
Imibono nompetha upende entsha "Loreal Prodigy"
Ngokwe-makhosi, ukupenda "Loreal Prodigy", ukubuyekezwa zazo ngezansi, kufanelekile ukusetshenziswa ekhaya. Imiyalelo ngezilimi eziningana kahle kubo bonkhe.
"L'Oreal Prodigy" uvame ukubizwa ngokuthi uveza ukumelana isilinganiso. Umthelela izinwele uhlala iDemo ngokuziqhathanisa isinyathelo ammonia compounds. Kodwa "L'Oreal Prodigy" ayikwazi chasiselwe ejenti toning, njengoba etholakala izinwele umbala ihlala isikhathi eside esingaphezu kwamasonto ambalwa.
Njengoba sekushiwo, omunye ethandwa kakhulu emakethe namuhla upende "Loreal Prodigy". Palette, ukubuyekezwa zazo iningi ngenxa yamakhono, siqukethe 18 shades. Kunezinhlobo ezihlukahlukene imibala yemvelo idonse abesifazane abaningi abafuna nje ukushintsha umfanekiso waso.
Phakathi inkampani akhiwa Ochwepheshe iphaneli kukhona 3 ukukhanya 5 ezimhlophe ensundu 10 (zazo 4 mnyama) shades. baphendukela bonke ezindleleni izinwele ngokwemvelo.
Izibuyekezo abathengi Iphalethi
Umkhiqizo abakhethiwe ngokwabo ubulili fair babo bonke ubudala. upende okusha "Loreal Prodigy", ukubuyekezwa zazo palette cishe njalo omuhle, ezifanele ukusetshenziswa okuqhubekayo.
Abanye abathengi imibala emnyama uqaphele ukuthi uma usebenzisa umbala "onsundu Frosty" babethole umphumela ongalindelekile. Izinwele sabukeka cishe abamnyama. Ngemva kwesikhathi esithile, zakhukhula umbala emva ukudaya kuya wayefisa. Girls Kunconywa ukuba uqaphele lapho ukhetha ukuthenga.
Nge lezimanga enjalo wabhekana amantombazane blonde abafuna ukuvuselela umbala zabo ngenxa yemibala yawo "wezinyo lendlovu 'noma " igolide white ". Ngo ukuzisebenzisa umphumela uhambelana okulindele.
Ukudweba "L'Oreal Prodigy": Izibuyekezo
"Isihlabathi White" libhekisela imibala ungakwazi ukujabulela ngokuphepha amantombazane. Ngokusho iningi labo, imibala njalo ukufanisa izithombe kwi iphakethe.
Yokugunyaza sokusetshenziswa ngokugqamile umkhiqizo zonke intombazane ngokuvamile udayi ezinweleni. Iningi labo liye ingezwe ku-amaphuzu ezikhona kanye upende omusha kusuka "Loreal". Kwenza izinwele esithambile futhi ukulawuleka. Bonke abasebenzisi babike ukuthi upende semikhawulweni ngokulambisa ezomile.
Noma yimuphi umkhiqizo zingatholakala futhi impendulo engeyinhle. Ngokuvamile imbangela wabo isilinganiso umbala fastness kuqhathaniswa nontanga bayo. Abakhiqizi ukuchaza zithako uyazonga (ngaphandle ammonia).
nephunga kabi abanye abantu bacabanga upende emva lokusebenza izinwele, izinsuku ezimbalwa ezengeziwe emva kwalokho. Enye ingxenye abathengi bacabanga nephunga nzima hhayi ebukhali kakhulu.
Abanye abathengi ungathandi intengo. Kubonakala kubo kuphakeme uma ziqhathaniswa imikhiqizo yezinye abakhiqizi. Lokhu zingachazwa ngezinqubo inani elikhulu ubuchwepheshe ezintsha elisetshenziswa ukudalwa umkhiqizo omusha ngamunye kusukela "Loreal" inkampani.
Ezinye amantombazane kusho ukuthi izinwele ngokushesha ngemva umbala ikamu ezimbi futhi kubonakale nokhahlo. Ngemuva omiswe, lo muzwa iphele. Kulokhu, umthengi Kunconywa ukusebenzisa ibhodlela nge-amplifier-ukunakekelwa, ingxenye isethi inki.
Izincomo ezenziwe ukusetshenziswa upende
Abakhiqizi baxwayisa ngokuthi "L'Oreal Prodigy" kungabangela ukusabela nomzimba. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa kangcono ukufeza isivivinyo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene nalabo lokuqala ukusebenzisa umkhiqizo.
Le nkampani futhi incoma ukuthi ngaphambi yokudweba ukususa zonke ubucwebe njengoba kungonakalisa ngokubukeka kwabo.
Ngakho, udayi "Loreal Prodigy" lapho izimpendulo zathathwa e isihloko namuhla emazweni amaningi waziwa. Yena uphathisa inqwaba abathengi. Lokhu kungenxa izinga okusezingeni eliphezulu umkhiqizo kanye brand nedumela.
Iqanda izinwele imaski ekhaya: zokupheka eliphumelela kakhulu izinwele ukunakekelwa
Yini uthingo? Kwenzeka kanjani kusuka?
Indlela uvakashele Hammam: Amasu ajwayelekile namasu
Ungadla Ungadliwa for ubhiya